ခံယူချက် – အတွေးအခေါ်အမြင် – Bel Ga ၏ တန်ဖိုး
Bel Ga အဖွဲ့သားများ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှု
Bel ga ဖြစ်ရပ်များ
အရည်အသွေးမြင့်ကြက်များ ၊ ကျန်းမာကျန့်ခိုင်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်း
ရုံးချုပ် ။ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
Bel Ga Myanmar Limited သည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု (၁၀၀%) Company တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင် တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ မျိုးရင်းခြံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကြက်သားဖေါက်ခြင်း လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သည့် Belgabroed အဖဲ့အစည်းမှ 51% ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ တိရိစ္ဆာန်အစားအစာများ ထုတ်လုပ်သော De Heus Animal Nutrition BV မှ (၄၉%)ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့်ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Bel Ga Myanmar တည်ထောင်ခြင်း​၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်မြင့်မားသော ကြက်သားပေါက်များအားမြန်မာ့ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ကြက်သားပေါက်များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအား ၁၅-မတ်လ-၂၀၁၈ တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်များတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှ ယူရိုပီယံကြက်ဥများမြန်မာနိုင်ငံသို့တင်သွင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့၊ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံရှိ Bel Ga Myanmar ကြက်သားဖေါက်စက်ရုံတွင် အကောင်ဖေါက် မြန်မာပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါသည်။ Bel Ga Myanmar Limited ​၏ ကြက်မျိုးရင်းခြံအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ လှော်ကားကျေးရွာတွင်၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည် ဆောက် လျှက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကြက်မျိုးရင်းခြံမှ ပထမဦးဆုံးသောပြည်တွင်းကြက်ဥထုတ်လုပ်နိုင်မှုအား ၂၀၂၀ အစောပိုင်း ကာလတွင် စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယူရိုပီယံ အဆင့်အတန်းမြင့် ကြက်သားပေါက်ထုတ်ကုန် များအား မြန်မာပြည် တွင်းရှိမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူတောင်သူများအတွက် အရည်အသွေးအဓိကကောင်းမွန်စေရန် အဓိကထား လုပ်ဆောင် လျှက်ရှိပါသည်။မွေးမြူသူတောင်သူများအတွက် ယူရိုပီယံနည်းပညာများမျှဝေခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ရန်လိုက်နာရန်များ အသိပညာများဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်တောင်သူများအကျိုးစီးပွားပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေရန်အဓိကထားလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ အမှီအခိုကင်း ၍နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာများကြွယ်ဝသော မွေးမြူရေး သမားများ​၏ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ် ထောက်ခံသော Bel Ga ဖြစ်လာစေရန်အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်။
ပရိုဖိုင်းကို download လုပ်ပါ
Bel Ga သည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်ပြည်ပပို့ကုန်စျေးကွက်အတွက် ၀ ယ်လိုအားထုတ်လုပ်သည့်နေ့အတွက်ကြက်အကောင်ငယ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါ DOC များသည် Aviagen (ROSS 308) ကဲ့သို့သောအထူးပြုမွေးမြူရေးကုမ္ပဏီမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။.
Bel Ga သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျိုးစိတ်မျိုးစုံမွေးမြူရေးကုမ္ပဏီ Hendrix Genetics မှဆင်းသက်လာသောနေ့ရက်ကာလဟောင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဤ DOL များသည်ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်သည်။.
ဘယ်လ်ဂ မြန်မာလီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် HACCP အသိအမှတ်ပြုရ ရက်သားကြက်ဖောက်ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီအဖြစ် 2022 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဤ HACCP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စားသုံးသူများအတွက် တသမတ်တည်း အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းသော ထုတ်ကုန်တစ်ခု ထုတ်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကို ပြသပါသည်။
မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သော Mr. Ben Cliteur မှလည်း " ဒါဟာ ဘယ်လ်ဂ မြန်မာလီမိတက်အတွက် ကြီးမားတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုပါ။ HACCP ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှူလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပြီး အရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့ အရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။" ဟု ၄င်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ကို သတင်းစကားဆိုထားပါသည်။
ဘယ်လ်ဂ၏ မျှော်မှန်းချက်မှာ ဥရောပမှ နည်းပညာများလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အရှိန်မြှင့်တင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများပြည့်မီစေရန်၊ ကြက်သားအသားတန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင် လွတ်လပ်သော ပြည်တွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်မွေးမြူရေးခြံများ : ဦးပိုင်အမှတ် ၁၁၁၉၊ ကွင်းအမှတ် ၆၈၀ B ၊ လှော်ကားကျေးရွာအနောက်ကွင်း ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
မြန်မာနိုင်ငံရှိကြက်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ : အကွက်အမှတ် ၃၁၂ ၊ ၃၁၃၊ ၃၁၄ မြောင်းတကာစက်မှုဇုံ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ
Bel Ga Myanmar ၏ မျိုးရင်းကြက်မွေးမြူရေးခြံ ဆောက်လုပ်ရေးကာလ
2017 Bel Ga ကြက်သားဖေါက်စက်ရုံဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနား
အကွက်အမှတ် ၃၁၂ ၊ ၃၁၃၊ ၃၁၄ မြောင်း
© Copyright 2017. ။ Bel Ga JSC မူပိုင်ခွင့်